Lacagta hawlgabka ee la damaanad qaaday - ee loogu tala galay adigaaga dakhligaagu hooseeyay | Pensionsmyndigheten
Lacagta hawlgabka ee la damaanad qaaday - ee loogu tala galay adigaaga dakhligaagu hooseeyay
Lacagta hawlgabka ee la damaanad qaaday waxay qeyb ka tahay lacagta hawlgabka guud ee aad qaadaneysid adigaaga dakhliga yaraa ama aan lahaan jirin wax dakhli ah oo lacag hawlgab lagu saleeyo.
Xaq ayaad u yeelan kartaa lacagta hawlgabka ee la damaanad qaaday haddii aad buuxisay 65 sano, aadanna lahayn dakhli lagu saleeyo lacagta hawlgabka ama uu hooseeyay.
Sanadka hawlgabka u go’an waa 65 waxayna u badantahay in 2023 laga dhigo 66 sano. Si aad u qaadatid lacag hawlgab oo la damaanad qaaday oo buuxda waxaa loo baahanyahay in aad Iswiidhan degganeyd 40 sano laga billaabo sanadka aad 16 sano buuxisay ilaa iyo sanadka aad 64 sano buuxineysid. Haddii intaas in ka yar aad waddanka degganeyd wey yaraaneysaa lacagta hawlgabka ee la damaanad. Waxay sanad walba oo kaa maqan yaraaneysaa 1/40.
Lacagta hawlgabka ee la damaanad qaaday waa la yareynayaa sidoo kale haddii aad leedihid hawlgab dakhli lagu saleeyay. Lacag dhimiddu waxay u dhaceysaa si darajo-darajo ah, waxayna keeneysaa in aan la bixin wax lacagta hawlgabka la damaanad qaaday ah marka lacagta hawlgabka dakhliga ku saleysan ay ka sarreyso heer go’an oo lacageed.
Lacagta hawlgabka ee la damaanad qaaday waxaa si waafaqsan xeerka iswiidhishka loo siin karaa qofki deggan waddan ka mid waddamada EU ama EES (EES waa waddamada Midowga Yurub iyo Norwey, Island iyo Liechtenstein).
Haddii aad dhalatay 1937 ama ka hor xaq baad u yeelan kartaa lacagta hawlgabka ee la damaanad qaaday. Waxay markaas megeysaa isbeddelki nidaamka hawlgabka lagu sameeyay 2003.